Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd ချ. တစ် Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံး (မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း) ဖြစ်ပါသည်, အလင်းအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, Precision Injection ကိုမှို, မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, CNC ထုတ်ယူခြင်းအုပ်စုစက်ရုံ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်။ 2017 ခုနှစ်တွင်ကအမျိုးသားရေးအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းသို့တီထွင်ခြင်းနှင့် 9001 က ISO လွန်ပြီ: 2015 ခုနှစ်, က ISO 14001: 2015 ခုနှစ်, ISO / TS16949: 2016 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အမြောက်အမေရိကအတွက်လက်မှတ်, ul ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလက်မှတ်နှင့်လွတ်လပ်သောသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အခွင့်အရေးများရှိပါတယ်။ အလင်းအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှုတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်ကြှနျုပျတို့သညျ "ဒီဇိုင်း-သေဆုံး / ဖွဲ့စည်း-အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ JIT ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်" ဟုပြည်တွင်းအဆင့်မြင့်တစ်နေရာတည်းမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဖန်တီးကျူးလွန်နေကြသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲနဲ့ contents တွေကိုအဘို့အ 70,000_responsible တစ်ဦးစုစုပေါင်းဧရိယာနှစ်ခုစက်ရုံတွေရှိပါတယ်။
စက်ရုံတစ်ဦးက: Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းရာတွင်ပါဝင်နေ Group မှစက်ရုံ, အလင်းအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ရိုးရာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းန်ဆောင်မှုများ
စက်ရုံ B ကို: မှိုဒီဇိုင်း, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မှိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု, တိကျဆေးထိုးတန်ဆာစက်ရုံအတွက် Engaged ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသတ္တုထုတ်ကုန်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရင့်ကျက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်သတ္တု Post-အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်ရုံရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်, ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်များ၏သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်မြင့်မားသောစံစမ်းသပ်ခြင်းတူရိယာများနှင့်စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထား။
တိကျစွာနှင့်တိကျစွာနည်းပညာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအရေးပါမှု attach, နှင့် "မဂ္ဂနီဆီယမ်ယဉ်ကျေးမှု" ၏စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းကြောင်းသစ်ရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ အားကြီးသောနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများနှင့် Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းနည်းပညာများအတွက် 20 မူပိုင်ခွင့်ရရှိသောနှင့်တရုတ်နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 'မဂ္ဂနီစီယမ်လေးစားမှု MEIZUN "မှတ်ပုံတင်ပါပြီ။
1. Semi-အစိုင်အခဲ rheological သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်ပေါင်းစည်း 100 ကျော်တင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း, 20 ရိုးရာအရည်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများပေးရန်, အားလုံးအလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် clamping စနစ်တပ်ဆင်ထားသော, ချ. စက်တွေသေဆုံး ။
2. Precision Injection ကိုမှို: အရွယ်အစားတန်ချိန်, မိုနိုခရုမ်နှင့် bicolor ဆေးထိုးတန်ဆာစက်တွေ၏ 75 အစုံ, တူညီတဲ့စက်ရုံဧရိယာ၌ဆေးထိုးတန်ဆာများနှင့်မှိုချောမွေ့နှင့်တည်ငြိမ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုညှိနှိုင်း။
3. CNC စက်ပစ္စည်း: 180 ဖရန့် NC စက်ပစ္စည်းစင်တာများသေ-casting ထုတ်ကုန်များ၏တိကျအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့တပ်ဆင်ထားတဲ့နေကြသည်။ စက်သတ်မှတ်ချက်များ: +0,02 မီလီမီတာ: 300 မီလီမီတာနှင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှုထက်အချင်းလျော့နည်းအရှည် 400 x ကို width ကို 300 x ကိုအမြင့် 500 မီလီမီတာ,
4. မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု: 10 မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်မှိုစက်များ, မှို, အတွေ့အကြုံများ၏ 15 နှစ်, Die-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း, Injection ကိုမှိုစက်ရုံဧရိယာထဲမှာပြီးစီးခဲ့နေကြသည်။
semi Solid သေကာစ် , မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , CNC စက်ပစ္စည်း , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း , အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်းသူ , injection တန်ဆာ
တိုင်းပြည် / တိုင်းဒေသကြီး :